Feon’ny Vehivavy Afrikana – tamin’ity herinandro ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2017 6:09 GMT
Manoratra i Fleur momba ilay raharaha mampitaintaina mikasika ireo miramila 7 voaheloka mandra-pahafaty noho ny fanolanana sy heloka manoloana ny maha-olombelona noho ny fanolanana zazavavy tsy ampy taona miisa 119 tao Kôngô. Nandray amin'ny ampahany ny andraikiny ihany koa ny governemantan'i Kôngô ka nanome fanampiana ara-bola ho an'ireo fianakavian'ny niharam-boina. Milaza i Fleur
…..mitondra hafatra sarobidy sy mafonja be izany! Tsoriko fa tena gaga be aho! Neken'izy ireo ny maha-tena henjana be ny fanolanana. Tsy mamafa ny rehetra ny fanampiana ara-bola, saingy tsara ny mahita fa raisina tamim-pahamatorana ary voasazy ny fanolanana sy ny famonoana olona. Mbola misy ihany ny fanantenana, na izany aza.
Nampiditra fanavaozana tao amin'ny Fanavaozana ny Volavolan-dalàna mahakasika ny pelaka ao Nizeria izay nahazo ny famakiana voalohany azy tao amin'ny Antenimieram-doholona i Black Looks. Vao mainka loza ny toe-javatra amin'izao fotoana izao. Ilay Volavolan-dalàna, tena mpamoritra tanteraka tamin'ny fotoana namoahana azy, dia hampiditra ihany koa ankehitriny ireo fepetra hafa hamoa-doza kokoa ho an'ny fiarovana sy ny asan'ny vondrom-piarahamonin'ny pelaka, ho an'ireo fikambanana miasa ho an'ny zon'ny LGBT sy ireo fikambanana miady amin'ny VIH/SIDA. Manoratra i Black Looks
Mampangina tanteraka ny olan'ny fivadian'ireo mitovy taovam-pananahana ao Nizeria ilay volavolan-dalàna ary manàla ny Zon'olombelona rehetra an'ireo mpiaro ny ZO, vehivavy tia vehivavy, lehilahy tia lehilahy, manana taova roa sy ireo olona nanaova taova fananahana.
Nanoratra lahatsoratra lava sy mahaliana mikasika ny fiantraikan'ny fanjanahantany teo amin'ny vehivavy Afrikana i Afrikan Eye. Ny tanjon'ilay lahatsoratra, hoy izy, dia tsy ny hanome tsiny fa ny ‘hizara fahaizana sy torohay ary hanome antsika izay fomba fijery rehetra ara-tantara raha mbola mijery ny toe-draharaha misy antsika amin'izao ary koa mba hanao drafitra entina hamolavolana ny hoavintsika’. Manoratra ihany koa izy
Enga anie isika, amin'ny maha-Afrikana, mba hiezaka ny hamerina ny vehivavy Afrikana amin'ny toerana feno haja sy voninahitra izay mihoatra noho ny nananany taloha mihitsy aza. Satria rehefa manaja ny vehivavy ihany ny firenena ary mandray azy ireo am-pahamendrehana, dia izay vao afaka hisy ny tena fandrosoana. Voalohan-daharana amin'ny maha-olombelona ny vehivavy noho ny maha-reny sy mpikarakara voalohany azy. Noho izany, amin'ny famolavolana sy fanorenana azy ireo, manorina ny firenena sy ny kontinanta iray manontolo isika.
Nahazo tsikera sy imailaka tafahoatra ireo blaogera manokana ao amin'ny tontolom-bolongana Keniana. Tao anatina lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Fanoratra Mahery Setra sy Mpanoratra Gangsta’ izay hanoherany ireo olona manoratra ireny tsikera sy imailaka ireny, nanoratra lahatsoratra tsara be izay nahazo fanohanana marobe teo anivon'ny tontolom-bolongana Keniana i W.M. Manoratra izy
Ny tsy fahalalam-pomba no fitaovam-piadiana dombo fampiasan'ireo nanàla ny tenany tsy ho ao anatin'ny fiarahamonin'ny fifanakalozankevitra mitombina. Ny ompa no aloka kelin'ny fanehoankevitra mampihetsi-po, ary ny gangsta manoratra ireo fitiavana/fitsiriritana diso fanantenana sy mifanindrin'ireo manana ny fifehezana, ary mirehareha amin'ny fandrindràny tsy refesi-mandidy ny tenin'izy ireo manokana.
Farany, manoratra mikasika ny hasarobidin'ny ‘fitazonana amim-pahakingàna ny fomba fisainanao’ i Ore raha teo am-pandehanana hijery ilay sarimihetsika ‘Hambo sy Fitsarana an-tendrony’, raha toa ka manoratra mikasika ireo 108 kilaometatra nodiaviny mandeha miasa ssy mody avy amin'ny asany i Mama JunkYard .